Zuza ngakumbi ngeeRobhothi zethu zoRhwebo | Ukurhweba ngeRobot
ngaphezulu konyaka omnye (AR)
ngaphezulu kweminyaka emi-4 (AR)
ngaphezulu kweminyaka emi-7 (AR)
ngaphezulu konyaka-1 (SR)
ngaphezulu kweminyaka emi-4 (SR)
ngaphezulu kweminyaka emi-7 (SR)
Zuza ngakumbi ngeeRobhothi zethu zoRhwebo
Ngaba ungathanda ukufumana ingeniso elula kunye / okanye ukwahlula utyalomali, ngaphandle kokuchitha ixesha, ngaphandle koxinzelelo lwengqondo, nangaphandle kokwazi kwimarike yesitokhwe okanye inkqubo?
Ngaphakathi Iirobhothi zokurhweba zimele isisombululo esifanelekileyo, zigwebe ngokwakho:
Ukunikezelwa kweerobhothi zethu zokurhweba
Ikhonkco le-YouTube- cliquer sakhlwe -Ukuze ubeke umxholo ongezantsi kulwimi lwakho kwividiyo- wenze njani? -
Umboniso wevidiyo yeerobhothi zethu zorhwebo
Ngaba ukhathele ukufumana Inzala encinci?
Ungathanda ukwenza inzuzo kwimarike yemasheya, kodwa awunalo ulwazi oluyimfuneko okanye awunalo ixesha lokuyinyamekela? Mhlawumbi woyika ukungqubana kunye nelishwa lotyalomali okanye mhlawumbi ufuna ukwahlula utyalomali lwakho?
Hlala uqinisekile : sinesisombululo kuwe!
Ngaba uyazi ukuba kunokwenzeka ukuba uqikelele kwimarike yemasheya, ngaphandle kokwenza nantoni na, ngaphandle kolwazi olukhethekileyo kwaye ukuvelisa ingeniso entofontofo?
Hayi ayilophupha, okanye umkhonyovu, kodwa isisombululo!
Njani? 'Okanye' Yintoni? Ngombulelo kwii-algorithms esizenzileyo kunye nokuskena i-CAC okanye i-DAX ukuthenga nokuthengisa ngokuzenzekelayo, ngaphandle kongenelelo lomntu.
Lolona tyalo mali lubalaseleyo yenza imali yakho ikhule!
Iphepha lokusebenza lonyaka-1 ikunika ulwazi oluchanekileyo.
Unomdla? Khawulezisa, kuba iinjini zethu zithengiswa ngesixa esincinci kumaxabiso anikezelweyo ngoku.
Zisebenza njani iirobhothi zethu zokurhweba
Ikhonkco le-YouTube- cliquer sakhlwe -Ukuze ubeke umxholo ongezantsi kulwimi lwakho kwividiyo- wenze njani? -.
Unxibelelwano: I-algorithms yethu ikhowudiwe kunye nemodyuli IproOrder yeqonga ProRealTime, ngeBhanki Ibhanki ye-IG.
Qaphela: Asidibananga neProRealTime kunye / okanye ne-IG Bank kwaye asifumani khomishini kubo.
I-CAC: IFransi i-40 Cash (€ 1) -I-CAC-Isalathiso sezona ndawo zimele amaFrentshi ezimeleyo kwimarike.
I-CFD: I-CFD yimveliso ephuma kuyo eyenza ukuba kube lula kwaye kungabizi kakhulu ukuqikelela kwizixhobo ezahlukeneyo zemali.
I-DAX: IJamani Imali engama-30 (€ 1) - I-DAX-Isalathiso sezona zitokhwe zingama-30 zimelwe kakhulu kwimarike yaseJamani.
Ngokuhlwa: Ukuba indawo ibanjiwe ekupheleni kweseshoni (ihlala ingo-23: 00) imali yokuhlawulwa ubusuku bonke inokusetyenziswa ngokuxhomekeke kwixabiso lesikhundla.
Iskripthi sevidiyo Isebenza njani iirobhothi zethu zokurhweba
I-algorithms yethu ikhowudiweyo kunye nemodyuli yeProOrder yesoftware yeProRealTime, ngeBanque IG Bank. Bathenga kwaye bathengise ngokuzenzekelayo ngokuzenzekelayo.
Iinjini zethu ziskena kwimarike CAC okanye i-DAX kwaye benze izigqibo zabo ngokuchanekileyo, ngokulandelayo kanye isicwangciso esiliqili.
Awudingi naluphi na ulwazi kwimarike yemasheya okanye kwinkqubo kwaye iinjini zethu ziya kusebenza nokuba ikhompyuter yakho icinyiwe.
Izinto eziluncedo zeinjini zethu
Ukucacisa kwintengiso yesitokhwe kusetyenziswa ii-algorithms zethu kubonisa ukwahluka okwamkelekileyo ukuba udiniwe kukufumana inzala encinci.
Ukukhetha ngokwengqondo kuhlala kudlala indima Amaqhinga amabi kakhulu kubaqikeleli. Ngeenjini zethu, lo mngcipheko awukho.
Zonke izikhundla ezithathiweyo zivaliwe ngemini enye ukuze hayi ukuhlawula iifizi zobusuku ngobusuku.
Oku kuthintela nakuphi na umsantsa onokwenzeka ebusuku okanye ngeempelaveki.
Enkosi kwizibonelelo zeCFDs kulula ukufumana ngaphezulu. Sikubonisa ukuba kanjani kwiphepha Phumelela +.
Ukuba iimeko ezithile ziyafezekiswa, irobhothi iya kubeka ixesha elifutshane lokuthenga okanye iodolo emfutshane. ngokuchasene nolwalathiso lwendlela ephambili.
Esi sisicwangciso esisebenzayo, kuba kwimarike yemasheya uluhlu ngamaxesha amaninzi.
Abatyalomali abasebenzisa mkhuba olandelayo ubuchule Kuya kufuneka bathathe ilahleko ezininzi ezincinci ngaphambi kokuba benze inzuzo enkulu. Le ndlela, nayo esebenzayo kakhulu, ineengxaki zokufuna ukuzola okukhulu.
Iirobhothi zethu zokurhweba zixhotyiswe nge Thabatha Inzuzo (phezulu) kunye Stop Ilahleko (ezantsi) ukuvala amashishini. Nangona phantsi kweemeko ezithile ezi ziya kuvalwa ngokukhawuleza okukhulu.
Ziyasebenza ngexesha lokuvula iiyure eziqhelekileyo zesitokhwe, ukusuka ngo-9: 00 ukuya ku-17: 30 emva kwemini. Kwakungeli xesha apho i ukusasazeka kwexabiso eliphantsi kwaye oko ukungazinzi kuphezulu.
Iinjini zethu zokurhweba zisekwe amakhandlela kwimizuzu engama-30. Ayinanto yakwenza nokuthengisa rhoqo ethi, kwinxalenye yayo, isebenzise amawaka eetransekshini ngomzuzwana, kwaye egcinelwe iinkampani ezikhethekileyo ekufuneka zikwazi ukurhweba ngeemali ezinkulu kakhulu. Zizo ezo Ezi iirobhothi ezinomatshini wokushicilela ombi, kwaye ngenxa yezizathu ezifanelekileyo, kuba zihlala zitshintsha ngokwazo ixabiso lezixhobo zemali abazithengisayo ukuze bafumane inzuzo ngazo.
Iinkcukacha kwii-algorithms zethu
Iinjini zethu zokurhweba zisebenzisa iSupertrend> isalathi kunye Umndilili wokuhamba ukufumanisa ulwalathiso lwendlela ephambili.
Basebenzisa iiBhendi zeBollinger kunye neStochastic Oscillator ukubona ukubuyela umva kwendlela.
Basebenzisa i-ADX kunye ne-ADXR ukulinganisa amandla ohlobo.
Babhekisa kwizalathi ezahlukeneyo ukucoca urhwebo olunokuba yingozi.
Basebenzisa ezinye izikhombisi zokumisa urhwebo kwangoko kuxhomekeke kwinqanaba lamaxabiso.
Ngamanye amaxesha basebenzisa i-Trailing Stop Loss.
Iirobhothi zethu zonke zixhotyiswe ngeNzuzo yokuThatha (ngaphezulu) kunye nokuPhulukana nokuMisa (ezantsi).
Zisetyenziselwa ntoni ezi zalathi zobugcisa?
ADX et I-ADXR : balinganisa umthamo wokuhambisa ixabiso ngaphandle kokwahluka kwexesha elidlulileyo.
Iibhola zeBollinger : zisetyenziselwa ukubonisa amanqanaba angaphezulu kokuthenga kunye nokugqithisa. Zibonisa ukuba intengiso izolile okanye ayizinzanga.
Umndilili wokuhamba : Babonisa ixabiso eliphakathi lexabiso ngaphezulu kwexesha elinikiweyo. Zinefuthe lamaxabiso agudileyo.
Stochastic : yi-oscillator etyhila iindawo zokuthenga kunye nokuthengisa kakhulu.
Supertrend : ihamba ngaphezulu okanye ngezantsi kwamaxabiso kuxhomekeke kwimeko. Icoca ngokufanelekileyo intshukumo encinci yekhosi.
IIVIDIYO ZOKUTHENGISA IIROBOTI
Iirobhothi zethu zorhwebo ezisebenzayo
Izalathiso kunye nolawulo lwemali
Ulawulo lwemali kunye neeNgxelo
Ukurhweba kwealgorithmic Grand-rue 10 CH-2054 Chézard-St-Martin
Ilungelo lokushicilela © 2020 - Robot-trading.io Onke amalungelo agciniwe